Titus Tadzingirwa 3 months ago
Zvine zvinogeneka bedzi kana D4D apinda Dougie anopedza masports zvemadriver ekushaya mari ayo Zvinoreveiko zvinenge zvaita. Simsboro anoita zvangu zvake straight.
Siwawa sihambi 3 months ago
Vhoterai pama CCc matatu
Ah 3 months ago
Hey makambona Zupco avm richikona here overtime inoiya driver ipapo, wozonzi hana kubhadharwa
,, When contacted for a comment by CITE, ZUPCO Chief Executive Officer, Everisto Madangwa, said he was in a meeting. ,,,
he never answers any qsn as HE is always in a meeting you wonder what those meetings YIELD
chimuti 3 months ago
Panorarakika seiii kana zvichidaii
Bad 3 months ago
Vanhu Ava ma1, Vari kukama mombe dzevaridzi vave kunyima fut varidzi vemombe chero MUTUVI zvawo zvinorwadza.Maaccident hobho.☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌻🌻🌻⭐⭐⭐⭐⭐⭐hebo yellow wakonzeresa yellow NHM
Let me put it this way,Salaries struck Zupco drivers again!
Bigboy 3 months ago
Kkkkkkk abasati bati one
36 minutes ago 6 Comments